“Waxaan u dagaalamayaa sida aan kaga qeyb gali lahaa koobka aduunka. Saddexdan xidigna waa kuwa aan kaga daydo kubada cagta”…Salah – Gool FM
“Waxaan u dagaalamayaa sida aan kaga qeyb gali lahaa koobka aduunka. Saddexdan xidigna waa kuwa aan kaga daydo kubada cagta”…Salah
(Liverpool) 08 Juunyo 2018. Xidiga kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Masar Mohamed Salah ayaa wuxuu xaqiijiyay inuusan wax niyad jab ah ka qaadi doonin dhaawacii kasoo gaaray kulankii finalka Champions League ay kula ciyaareen Real Madrid.
Salah ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in xulkiisa qaranka Masaru u kala qeyb qaato koobka aduunka ee 2018 khamiista soo aadan ka furmi doono dalka Russia.
Mohamed Salah ayaa u sheegay wargeyska “L’Equipe” ee dalka France “Tartanka Champions League wuxuu ahaa mid aad u adag, laakiin waxaan ahay dagaalyahan waana hubaa inaan diyaar u ahay inaan ka qeyb qaato Koobka Adduunka.”
“Waxaan ahay dagaal yahay iskuma dhiibi doono dhaawaca, waxaan hubaa in xulka qaranka Masar aan kala qeyb gali doono koobka adoonka”.
Dhinaca kale laacibka kooxda Liverpool ayaa wuxuu ka warbixiyay xidigaha uu kaga daydo kubada cagta tan iyo yaraantiisa, wuxuuna yiri: “Saddexda halyay xidiga reer Brazil Ronaldo, Francesco Totti iyo Zinedine Zidane”.
RASMI: Juventus oo ku dhawaaqday saxiixa goolhaaye Mattia Perin
Rashford: “Waxaan ka mid ahay taageerayaasha sida aadka ah u jecel Cristiano Ronaldo, laakiin Messi ayaa ah kan ugu fiican”